"जनावरसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धबाट जोगिनुपर्छ": डा. हेमन्त चन्द्र ओझा | Kendrabindu Nepal Online News
32131138 982515 7444306 23704317
६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १७:३०
काठमाडौं । हालसालै चीनमा देखा परेको नोबेल कोरोना भाइरसले अहिले विश्वभर तरंग ल्याएको छ । मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको चीनको पछिल्लो अधिकारिक तथ्याङ्कले कोरोना भाइरसको स्रक्रमणबाट संसारभर ७२ हजार ४३६ जना संक्रमित भएका छन् । भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म एक हजार ८६८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार १२ हजार जना भन्दा बढी मानिस निको भएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमित एक जना मात्र भेटिएको छ । संक्रमण अझ नरोकिएको अवस्थामा यसबाट जोगिन हामीले के गर्नुपर्छ भनेर इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ मेडिकल सुपरटेन्डेन्ट डा. हेमन्त चन्द्र ओझासँग केन्द्रबिन्दुका उपसम्पादक विवश कुलुङले ५ प्रश्न गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसक कति प्रकारका हुन्छन् ?
यो कोरोना भाइरस भनेको थुप्रै प्रकारका हुन्छन् । अहिले चीनमा देखा परेको नोवेल कोरोना भाइरससहित ७ प्रकारका भाइरस भने मानिसमा लाग्ने कोरोना हुन् । विशेषगरी जनावरबाट मानिसमा सर्ने रोग भएकाले घरेलु तथा जंगली जनावरसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ ।
कोरोनाको संक्रमण रोक्न नेपालमा के के प्रयास भइरहेका छन् ?
यस्तो अवस्थामा कहिँ कतै संक्रमण देखिएमा त्यसको सामना गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार छ । थुप्रै नाका र विमानस्थलमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था छ । सबै अस्पतालमा त्यसै अनुसारको सतर्कता अपाइएको छ ।
कोरोना भाइरस लाग्नबाट जोगिन के गर्नुपर्छ ?
जति पनि सरुवा रोगबाट बच्न हामीले प्रयास गर्छौ त्यसरी नै सरसफाईका उपायहरु अपनाउनुपर्छ । नियमित रूपमा हात सफा गर्ने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने । खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा रुमालले मुख छोप्ने । मासु र अण्डा राम्रोसँग पकाएर खाने । कोरोना भाइरस लागेको लक्षण देखिएका मानिसदेखि टाढा बस्ने । पशुपन्छी तथा जनावरबाट टाढा रहने । भिडभाडमा सकेसम्म नजाने । चिसोबाट बच्ने । आराम गर्ने । तातो झोल नियमित खाने । जंगली र घरेलु जनावरबाट टाढा रहनुपर्छ ।
रोगको संक्रमण देखिहालेमा यसका उपचार विधिहरु के के छन् ?
तत्काल अस्पताल जानुपर्छ । चिकित्सकको परामर्श अनुसारको औषधी सेवन गर्नुपर्छ ।
कोरोना भाइरस पत्ता लाग्न कति समय लाग्छ ?
यति समयमा लाग्छ भन्दा पनि यसबाट जोगिनु नै राम्रो हो । नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता दिएकाे परिक्षण ल्याव नभएकाले नजिकको देशमा भर पर्नुपर्ने अवस्था भने छ तर याे त आपसी समझदारी हाे यहाँकाे परिक्षण गर्नु परेमा हङकङ पठाउने गरिएकाे छ ।
५ प्रश्न, काेराेना, जोखिम, बच्ने उपाय
Prevलागुऔषध दुर्व्यसन : समस्या र समाधान
द्वन्द्वकालमा सम्पत्ति रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न आग्रहNext